इन्टरनेटमा भाइरल भैरहेको यो एक जोडी, वास्तवमा को हुन् उनीहरु ? – गोर्खा संसार
इन्टरनेटमा भाइरल भैरहेको यो एक जोडी, वास्तवमा को हुन् उनीहरु ?
गोर्खा संसार२०७५, २ बैशाख आईतवार ११:५६
एजेन्सी, हिजो आज सोसियल मिडियामा एक अत्यन्तै कालो वर्णको केटा र राम्री सेतोवर्णको केटीको फोटो भाइरल भैरहेको छ । फेसबुकमा मात्र हैन यी दुइको फोटो ट्वीटर, व्ह्वाट्सएप मा पनि उत्तिकै भाइरल भैरहेको छ ।
यो त भयो उनको परिचय तर यी युवती र ति कालोवर्णको युवक एटली कुमार बीच के सम्बन्ध होला ?
वास्तवमा उनीहरु श्रीमान श्रीमती हुन्, उनीहरुले ८ बर्ष लामो लब अफेयर पश्चात बिबाह बन्धनमा बाधिएका हुन् । उनीहरुले मे २०१४ मा नै बिहे गरेका थिए भने उनको बिबाहमा दक्षिण भारतीय मुभी स्टारहरु पनि सरिक भएका थिए ।